Madaxweynaha Somaliland oo jawaab deg deg ah siiyay Farmaajo - Awdinle Online
Madaxweynaha soomaalilnad Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii uu Madaxweyne farmaajo xalay sheegay ee ahaa in Soomaaliland asyan ak go’een Soomaaliya inteeda kale.
Madaxweyne farmaajo ayaa xalay, isaga oo marti ku ahaa dood Cilmiyeed uu soo Agaasimay Machadka Raas ayaa sheegay in midnimada soomaaliya ay tahay muqadas, balse Somalailand muddo 30 sano ah aqoonsi raadinayaan welina helin,isla markaana aysan jirin wadan Afrikan ah oo kala go’aya.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi cabdi oo Maanta soo xirayay tababar macalinimo ayaa sheegay in Farmaajo uusan ka hadli Karin midnimada Soomaaliya, isla markaana isaga uu yahay qofka wax ka socon la’yihiin.
Soomaaliland ayaa aamisan inay ka go’day Soomaaliya inteeda kale welina mehin aqoonsi, hayeeshee ay xusid mudan tahay in aysan ku Shaqeyn amarada kasoo baxay Madaxda Dowladda federaalka Soomaaliya.
Previous articleBanaanbaxyo xoogan oo ka socda Gobolka Gedo & Saraakiisha Ciidamada…
Next articleSarkaal Boolis oo lagu dilay Muqdisho & faah faahin laga helayo